Otu esi enweta blọọgụ WordPress gị site na mkpado na Template Mgbasa Ozi gị
Anyị na-arụ ọrụ na-ebuli ụfọdụ njem email maka onye ahịa na-akwalite ọtụtụ ụdị ngwaahịa na saịtị WordPress ha. Nke ọ bụla n'ime ndebiri email ActiveCampaign anyị na-ewu bụ ahaziri nke ukwuu maka ngwaahịa ọ na-akwalite yana inye ọdịnaya. Kama idegharị ọtụtụ ọdịnaya emepụtara nke ọma na nke edobere na saịtị WordPress, anyị jikọtara blọọgụ ha n'ime ndebiri email ha. Agbanyeghị, blọọgụ ha gụnyere ọtụtụ ngwaahịa ka anyị wee mee ya
Njikwa ihe bara uru dijitalụ (DAM) nwere ọrụ njikwa na mkpebi gbara gburugburu nbata, nkọwa, katalọgụ, nchekwa, iweghachi na nkesa nke akụ dijitalụ. Foto dijitalụ, ihe ngosi, vidiyo, na egwu na-egosiputa mpaghara ebumnuche nke njikwa akụrụngwa mgbasa ozi (otu mpaghara DAM). Gịnị bụ Digital Asset Management? Njikwa akụrụngwa dijitalụ DAM bụ omume nke ijikwa, ịhazi na ikesa faịlụ mgbasa ozi. Ngwa DAM na-enyere ndị na-emepụta aka ịmepụta ọba akwụkwọ foto, vidiyo, eserese, PDF, ndebiri na ndị ọzọ
Wenezdee, Machị 30, 2022 Wenezdee, Machị 30, 2022 Douglas Karr
Dị ka azụmahịa, ị tinyela ọtụtụ oge, mbọ na ego n'imepụta ọmarịcha webụsaịtị ma ọ bụ saịtị e-azụmahịa. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ azụmahịa ọ bụla na ndị na-ere ahịa na-arụsi ọrụ ike iji nweta ndị ọbịa ọhụrụ na saịtị ha… ha na-emepụta ibe ngwaahịa mara mma, ibe ọdịda, ọdịnaya, wdg. Onye ọbịa gị rutere n'ihi na ha chere na ị nwere azịza, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị ị na-achọ. maka. Otú ọ dị, ọtụtụ oge, onye ọbịa ahụ bịara gụọ ha niile